Yaab Nin safar u baxay su aal weydiyay Haweeney aad u qurxoon kadib la kulmay Arin ka yaabisay . | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Arimaha Bulshada » Yaab Nin safar u baxay su aal weydiyay Haweeney aad u qurxoon kadib la kulmay Arin ka yaabisay .
Yaab Nin safar u baxay su aal weydiyay Haweeney aad u qurxoon kadib la kulmay Arin ka yaabisay .
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 13-08-16 8:52 AM Nin ayaa kaligii sheekeystay, waxa uuna is weydiiyay, Waa maxey maah maahda oraneysa: Sir naageed lagama sal gaadho?
Bal ka waran hadii aan ka sal gaaro?
Hadii aan isku dayo toloow maxaan la kulmi doonaa?
Dhamaan su’aalahan ayaa maskaxdiisa kusoo noq noqday, waxa uuna guda galay safar dheer isagoo baaritaan baaxad leh u biyo qaatay, si uu uga sal gaaro sirta dumarka ee lagu tilmaamo mid aad u halis badan.
Ninkii ayaa isagoo meel baadiyo ah lugeynaya waxa uu la kulmay haweeney qurux badan oo ceel joogta, wuxuu damcay inuu xoogaa kusoo dhawaado, balse wey kasii durugtaa ayadoo ka cabsi qabta in uu dhibaateeyo, waxa uuse salaan kadib su’aalay: Bal wax iiga sheeg sirta dumarka?
Haweeneydii ayaa oohin la dhacday ilaa heer oohinteeda ay kusoo baxaan dhamaan dadkii ceelka ka ag dhawaa, ninkii oo yaaban marna naxsan ayaa waxa uu naagtii weydiiyay: Maxaa kaa oohiyay, su’aal unbaan ku weydiiyaye?
Haweeneydii ayaa tiri: Waxaan doonayaa in dadkaan soo socdaa ay ku dilaan.
Ninkii oo hadana aad usii yaabay ayaa yiri: Maxey dadkani igu dilayaan, xumaan maba aanan kuu geysane, niyadeyduna ma aheyn inaan ku xumeeyo ama kugu xad gudbo, kaliya waxaan doonayay inaan cilmi kaa kororsado, si aan wax uga ogaado sirta dumarka.
Haweeneydii ayaa isla markii waxa ay qaadatay wadaanta ceelka biyaha looga darsado oo xiligaas ay biyo ku jireen, waxa ayna korkeeda ku shubtay biyihii.
Ninkii ayaa markale arintu ku xumaatay isagoo dhaqanka haweeneyda la yaaban ayaana waxaa goobtii soo gaadhay dadkii isu soo baxay oo moodayay in ninku uu naagta faraxumeyn u geystay, isla markaana waxey bilaabeen inay ninkii u gacan qaadaan, balse haweeneydii ayaa soo booday oo tiri: Ceelkan ayaan ku dhacay, ninkan ayaana isoo bad baadiyay oo ilaahey ii bixiyay.
Dadkii ayaa farxay, ninkii ayeyna hambalyo iyo bogaadin isugu dareen, ayagoo weliba geesi ku tilmaamay, waxa ayna usii raaciyeen abaal marino.
Ninkii oo ilaa iyo iminka aan waxba ka fahamsaneyn dhaqanka haweeneydani sameyneyso ayaa markale su’aalay: Maxaad ula jeedaa dhaqama nuucan ah, maxeyse tahay xikmada ka danbeysa?
Haweeneydii ayaa qososhay waxa ayna tiri: Sirta dumarka ee aad raadineyso ayaa sidan ah, hadii ay dhib kaa dareemaan god ayey kuu qodaan, hadiise ay wanaag kaa dareemaan farxad iyo bad baado ayey kuu noqdaan..!